Norway oo maxkamada looga adkaaday kiiska haweeneydan ay tarxiishay. - NorSom News
Norway oo maxkamada looga adkaaday kiiska haweeneydan ay tarxiishay.
Maxkamada racfaanka ee Borgarting Lagmannsrett, ayaa dowlada Norway ku xukuntay inay jabisay xeerka xuquuqul insaanka, kadib markii gabar u dhalatayn dalka Iran ay sanadkii 2017 si qasab ah uga tarxiishay Norway, kuna celisay dalkeedii.
Gabadhan oo magaceedu uu yahay leila Bayat ayaa sanadkii 2009 magangalyo ka codsatay dalka Norway, waxeyna sheegtay inay ka cabsaneyso inay ciqaab kala kulanto hey´addaha garsoorka dalka Iran.
Norway ayaan rumeysan warka gabadhan, waxeyna diiday inay siiso magangalyo, iyada oo sanadkii 2017 gabadhan si qasab ah diyaarad looga saaray Norway, laguna celiyay dalkeedii.
Markii lagu celiyay dalka Iran ayay maxkamad kutaal dalkaas ku xukuntay jeedal ama in lagu sameeyo jirdil. TV2 dalkan Norway ayaa warbixin ka diyaariyay dhibaatada ay la kulantay haweeneydan.
Sanadkii 2018 ayay Norway kusoo noqotay, waxaana la siiyay magangalyo, kadibna waxey maxkamad la fuushay dowlada Norway, iyada oo dowlada ku eedeysay inay masuul ka aheyd dhibtii ay kala kulantay dowlada Iran, kadib markii dalkaas lagu celiyay.
Isbuucan ayay dowlada Norway kaga guuleysatay racfaanka kiiska kala dhaxeeyay ee maxkamada, waxaana Norway lagu eedeeyay inay jabisay xeerka xuquuqul insaanka Yurub.
Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, fadlan riix halkan: Barteena Youtube-ka, kadibna Subcribe saar.
Xigasho/kilde: Norge dømt for brudd på torturforbud i Leila-saken
Previous article101 jir ka caafimaaday cudurka Coronavirus.
Next articleTaajirkii Soomaaliya qalabka ugu deeqay, oo Norweyna qalab kale soo gaarsiiyay.